Ahoana ny fomba hamoronana sary PNG amin'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ny fananana fiheverana sasantsasany momba ireo endrika sary samihafa misy ary momba ny fanovana sary iray avy amina endrika iray mankany amin'ny iray hafa dia tena ilaina raha te-hanatsara ny endrikao ianao. PNG dia iray amin'ireo endrika ampiasaina indrindra amin'ny famolavolana sary, ka heveriko fa zava-dehibe ny fahalalana tmanova sary JPEG, endrika izay saika ireo izay ampidinintsika avy amin'ny internet dia anaty PNG. Adobe Photoshop dia fitaovana tsara hanatanterahana izany ary izany dia iray amin'ireo zavatra hampianariko anao amin'ity lahatsoratra ity.
Rehefa milaza izahay fa te-hamorona sary PNG, fantatro fa maro aminareo no tsy miresaka ny fanovana endrika fotsiny fa te hanao mianatra ny fomba famoronana sary misy ambadika mangarahara. Amin'ity lahatsoratra ity dia hampiditra fampianarana tsotra momba ny fomba fanaovana azy amin'ny Photoshop koa aho. Na eo aza izany, alohan'ny hidirako amin'ilay raharaha dia hijanona aho hanazava hoe inona marina ny PNG ary inona ny tombony omen'ity endrika ity
1 Inona ny sary PNG?
1.1 Rahoviana isika no tokony hisafidy an'ity endrika ity?
2 Ahoana ny fomba hamoronana sary PNG amin'ny Adobe Photoshop
2.1 Ovao ny endrika sary
2.2 Mamorona sary miaraka ambadika mangarahara amin'ny Photoshop
2.2.1 Manokatra ny sary izahay
2.2.2 Ahoana ny fomba hanaovana izany
2.2.3 Ahoana ny fanesorana ny background
2.2.4 Mitandrema rehefa mitsitsy
Inona ny sary PNG?
PNG dia endrika fisie izay mamela mametaka fampahalalana sary tsy misy fatiantoka, izany hoe, amin'ny teôlika amin'ny famatrarana, ny antsipirian'ny sary tany am-boalohany tsy voafehy dia tsy ho very.
Izy io dia endrika manintona tokoa ho an'ny famolavolana sary satria tsy mitovy amin'ny an'ny rakitra JPEG, farafaharatsiny ho an'ireo maso tsy manana traikefa toa ahy, afaka mitahiry loko 16 tapitrisa be izao ary manome tombony lehibe: manohana fiaviana mangarahara.
Rahoviana isika no tokony hisafidy an'ity endrika ity?
Ity endrika izay noforonina ho an'ny tranonkala ity dia ny mety raha hiasa amin'ny fanoharana isika na raha mamolavola atiny ho an'ireo tranonkala mila mitazona vahaolana tsara izahay, toy ny Logos. Izy io koa dia endrika mahasoa hamoronana photomontages, collages sy afisy.
Ahoana ny fomba hamoronana sary PNG amin'ny Adobe Photoshop
Ovao ny endrika sary
Raha ny tadiavintsika dia ny manova ny endrika endrika anananay ao amin'ny JPEG, tsotra dia tsotra. Sokafy ny sary tadiavinao ao amin'ny Adobe Photoshop ary apetraho ny kursor amin'ny takelaka fisie. Hiseho ny menio iray, avelao ny bokotra eo amin'ny safidy «fanondranana« ary tsindrio "Fanondranana haingana toy ny PNG". Afaka segondra dia vitanao ny manova ny endrikao amin'ny PNG.
Mamorona sary miaraka ambadika mangarahara amin'ny Photoshop
Manokatra ny sary izahay
Ny zavatra voalohany hataontsika dia sokafy ny sary avy aiza no tianay esorina ny background. Vantany vao misokatra ianao dia tsy maintsy safidio izay tiantsika hovonina ny sary, raha ny amiko dia ny zebra roa. Misy maro Fitaovana fifantenana ao amin'ny Adobe Photoshop. Hanazava ny mora kokoa ny misafidy izany amin'ireto tranga ireto, fa ny zavatra rehetra dia miankina amin'izay tianao hofidina sy izay heverinao fa mandaitra indrindra.
Ahoana ny fomba hanaovana izany
Misafidiana iray fifantina fitaovana rehetra, tsy mampaninona izany. Rehefa manao izany ianao dia hiseho ny andiana safidy safidinao eo an-tampon'ny efijery. Raha manao izany ianao tsindrio ny «select subject», Photoshop dia hanao a fifantenana mandeha ho azy eo ho eo, saingy matetika tsy tonga lafatra. Mialà sasatra, voavaha mora foana ireo kileman-toetra kely ireo.
Eo akaikin'ny «safidio lohahevitra» dia ho hitanao ny Safidy "misafidy ary asio sarontava". Amin'ny tsindry tokana dia handeha ianao a fomba natao ho anao mba hahatanteraka ny nofidinao. Ao amin'ny menio ho an'ny fitaovana dia hahita borosy isan-karazany ianao, misy fitaovana roa izay ilaina ho ahy raha ny fanatsarana ny fifantenana: «Borosy hahamendrika ny sisiny», mety tsara amin'ny fiasana amin'ny volo, ary "Borosy", tena ilaina tokoa ny manampy na manala ny atiny tadiavinao amin'ny safidinao.
Rehefa mampiasa ny sarontava mifantina ianao, Manoro hevitra anao aho hilalao amin'ny "mangarahara", mba hahitanao ny zavatra ampidirinao ao amin'ny fifantina sy ny zavatra hafoinao. Ny tandindona "+" sy "-", izay hita eo an-tampon'ny efijery, dia ampiasaina mba hisafidianana raha manampy votoaty amin'ilay safidy ilay borosy na, ny mifanohitra amin'izay dia mampihena azy.
Araraoty ireo fitaovana ireo, mitandrema ary ampitomboy mba hisafidianana tsara ny sisiny. Rehefa faly amin'ny zavatra hitanao ianao, tsindrio "ok" dia hiverina amin'ny interface Photoshop mahazatra ianao.
Ahoana ny fanesorana ny background
Hamarino raha marina ny safidinao, tadidio fa raha mbola mieritreritra ianao fa afaka manatsara azy dia azonao atao foana ny mampiditra ilay sarontava mifantina. Rehefa vita ny safidy dia mila fotsiny ianao tsindrio ctrl + C sy ctrl + V (raha miasa amin'ny Windows ianao) na mibaiko ny + C sy ny baiko + V (raha miasa miaraka amin'ny Mac ianao). Araka izany ho adikao sy apetakao ao aoriany ny safidinao, ho hitanao izany a sosona vaovao. Mamarana, sokafy ny sosona afara ary esory izany Efa manana ny sarinao amin'ny PNG ianao miaraka amina background mangarahara vonona hampiasa azy amin'ny volavolanao!
Mitandrema rehefa mitsitsy
Avelao aho hanome anao tendro farany iray. Rehefa mitsitsy ianao dia jereo tsara ary alao antoka fa misafidy tsara ny endrika (PNG) ianao. Raha mitahiry amin'ny endrika hafa ianao, toy ny JPEG, Photoshop dia hamonjy ny sarinao miaraka amina fotony fotsy ary mety tsy mety aminao izany. Avelako ianareo roa sary mba ho hitanao ny fomba hitahiranao ilay rakitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fomba hamoronana sary PNG amin'ny Photoshop